Ogaden News Agency (ONA) – Maxkamada Caalamiga ee Dambiyada (ICC) oo ugaadhsanaysa Danbiilayaasha dagaal
Maxkamada Caalamiga ee Dambiyada (ICC) oo ugaadhsanaysa Danbiilayaasha dagaal
Maalintii Arbacada ahayd ee bisha May ay ahayd 16ka ayaa waxaa maxkamad ICC ee magaalada Haag ee wadanka Nederland (Holland) la horkeenay eedaysanaha mudada dheer la raadinayey, Taliyihii Ciidamada Serbiga ee Boosniya Ratko Mladic.
Ratko Mladic wuxuu dhuumasho ku jiray mudo 15 sandood ah, Waxaan lagu eedaynayaa sedex Qodob:-
1.Gumaad dad shacab ah.
3.Ku xadgub Xuquuda Bani’adamka.
Sidaad la socotaan Ratko Mladic wuxuu hoogminayey ciidankii Serbiyinta ee Gumaadka naxariis la’aanta ah ka gaystay guud ahaan dalka Bosnia, isagoo si aad ah loogu xusuusto gumaadkii magaalada Serebrenica halkaasoo ay si naxariis la’aan ah ugu toogteen ciidamadiisa dad gaadhaya 8000 oo ruux oo ahaa rag laga soo soocay haweenkii oo meel la’isugu keenay sanadkii 1995.
Gacan-ku-dhiigle Ratko wuxuu sidoo kale gumaad ka gaystay meelo farabadan oo ka mid ah dhulka Musliminta ay ka dagan yihiin Boosnia gaar ahaan magalada caasimada ee Sarajevo. Ratko wuxuu dagaal ooge ka ahaa dagaalkii sokeeya ee ka socday halkaas 1992-1995kii oo dawladii Yugoslavia ee burburtay ay ku qaaday shacabka Bosnia.
Waxaa ka horeeyay Jenenkan oo Maxkmadda Caalamiga ee damiyada Dagaalka (ICC) la soo taagay dambiilayaal ay ka mid yihiin Madaxweynihii hore ee Yuguslavia Slobodan Miloševic kaas maydkiisii laga helay qolkii uu ku xidhnaa ee magaalada Haag March 2006. Sidoo kale waxaa xidhan Hogaamiyihii dhinaca siyaasade ee Serbiyiinta-Bosniya Radovan Karadzic oo ahaa caqliga ka dambeeyay gumaadka. Shacabka Reer Boosniya iyaga oo gacan bidxeeyn aad u badan kala kulmay aduunka waxay u soo mareen xoriyadooda dagaal aad u khadhaadh, ugu dambayntiina way ka xoroobeen Serbia/Yuguslavia waxayna noqden dal xor ah.
Maxkamada Caalamiga ee dabiyada Dagaalku waxaa lagu asaasay magaalada Rome July 2002, waxaana loogu talagalay in qofkasta oo dambi caalamai ah gala la soo taago, haddii la ogaado in dalkiisa aan lagu maxkamadayn karin.
Waxaa ka mid raga dambiyada lagu soo oogay oo maalin dhaweyd lagu dhawaaqay inuu yahay dambiile madaxweynihii hore ee Libria Charles Taylor. Charles waxaa lagu soo eedeeye faldambiyeed dagaal oo uu ka fuliyey dalka ay dariska yihiin ee Sierra Leone. Halkaasoo uu ka socday dagaal sokeeyo.
Dadka ay maxkamadu amartay in la soo xidho way u badanyihiin waxayna sanadahan dambe xooga saartay wadamada Afrika iyo Asia gaar ahaan Carabta. Waxaa ku jira raga qaar ay la tagtay dabayshii Carabta iyo kuwa xukuna haysta wali sida M/W dalka Sudan iyo qaar ka mid ah xukuumadiisa.
Meles oo qarka u saran in la soo taago Maxkamada ICC.
Kalidii taliye kasta waxaa sugaysa halka ay mareen kuwii isaga la midka ahaa ee ka horeeyey. Meles oo ah kaligii taliye dambiyo dagaal oo la xqiijiyay gaystay sida gumaad dad shacb ah oo aan waxba galabsan iyo xad gudub xuquuqul Insaanka oo uu ka galay shucuubta ku dhaqan Geeska Afrika gaar ahaan shacabka Ogaadeeniya, Gambela, Oromo, Amhara iyo dambiyadii foosha xumaa ee ka sameeyay magaalada Muqdishu, waxaa sugaysa Maxkamada caalamiga ee Haag.(ICC).
Jaaliyadaha Soomaalida Ogaadeeniya waxay Dabayaaqadii sanadkii 2010kii banaanbax aad u balaadhan ka hor dhigeen Maxkamada Caalamiga ee dambiyada dagaal horteeda iyagoo ka cabanaya gumaadka ay ciidamada Itoobiya ku hayaan shacabka Soomaalida Ogaadeeniya waxaana gal dacwo ah loo furay Xukuumada Meles Zinawi iyo Genralada Ciidamadiisa hogaamiya oo gacan weyn ku leh gumadaka shacabka aan waxb galabsan. Generalda gumaadka gaystay waxaa ka mid ah Gen.Samoro, Gen Gebre, Gen. Heylegebresilase. Sidoo kale daba-dhilif Cabdi iley oy isticmaalaan gumaadka shacabka iyo gacan ku-dhiiglayaal la jooga Jigjiga.
Jaaliyadaha iyo qaraabadii dadkii ay Ciidamada Itoobiya Gumaadeen ayaa meela kala duwan ka gudbiyay dacwadaas iyadoo meela kala duwan ay ka socoto xaqiiqo raadin iyo in ay ku soo ogooto dambiyada ay galeen kooxdan Wayaanaha ah ee dulmiga ku haysata Itoobiya.
Waxaa hubaal ah in mudo aan fogayn la arki doono kaligii taliye Meles Zinawi oo ku xidhan qol yar oo ku yaala magaalada Haag ee dalka Nederland laguna soo eedeeyey gumaadkuu ka gaystay Ogaadeniya.